Xulka K/cagta Kaamiruun oo noqday Dalkii ugu horeeyay ee si rasmi ah uga hara tartanka Koobka Aduunka. – Puntland Voice
Xulka K/cagta Kaamiruun oo noqday Dalkii ugu horeeyay ee si rasmi ah uga hara tartanka Koobka Aduunka.
June 20, 2010 3:03 pm Views: 19
Ciyaartoyda Xulka Qaranka Kaamiruun ayaa noqday Dalkii ugu horeeyay gaar ahaan Afrika oo si rasmi ah uga hara tartanka Koobka aduunka kadib kulankii xalay ay la yeesheen Xulka Dalka Denmark markaasoo 2-1 lagaga adkaaday.
Ciyaartii aad u adkeyd ayaa xalay dhexmarat Xulalka kaamiruun iyo Denmarka taasoo ugu danbeyn ku soo idlaatay 2-1 oo ay guushu ku racday Xulka Denmarka oo qaarada Yurub ka tirsan.
kulanka xalay laga badiyay Kaamiruun oo ahayd markii labaad ee laga adkaado tan iyo markii tartaku bilowday ayaa ka dhigtay xulka Kaamiruun inuu noqdo Dalkii ugu horeeyay ee si rasmi ah ugu hara wareega 1aad ee koobka aduunka madaama ay wax dhibco ah lahayn islamarkaan halka kulan ee u harsan hadii ay badiyaan xitaa aysan waxba u soo kordhin karin.
Guruubka E oo ay ku wada jiraan Xulalka kubada cagta Cameroon, Denmark,Holland iyo Japan ayaa ilaa iminka waxaa 6 dhibcood ku hogaaminaya Xulka Holand, Japan 3 dhibcood,denmarka 3 dhibcoo iyo Kaamiruun oo aan waxba lahayn.
Xulka kaamiruun kulankooda ugu danbeeya waxaa ay la yeelan doonaan 24 Bishaan Xulka Holand halka Denmark iyo Japan oo mid 3 dhibcood lehna wada ciyaari doonaan isla 24-ka bishaan sidaa daraadeed ayay qasab tahay labadaani xul in midkood soo baxo halk holand hore u soo baxday taas ayaana sidaas oo kale khasab ka dhigeysa in Kaamiruun hartay oo aysan wax rajo ah lahayn.
Kulamadii shalay iyo xalay
Slovakia vs. Paraguay 2;30
Italy vs. New Zealand 5:00
Brazil vs. Ivory Coast 9:30